Nezvedu - AOLGA INDUSTRY LIMITED
Kuvimba neHong Kong uye kwakavakirwa muShenzhen, Aolga anga achiomerera kune bhizinesi pfungwa yekuva pragmatic, inoshanda, yakatsiga uye yakavimbika yakatarisana nenyika kubva payakagadzwa. Nechinangwa chekugadzira yepasi rose kirasi yemhando yakachengeteka uye yakavimbika yepamusoro-yekupedzisira zvigadzirwa zvemagetsi, Aolga inopa vatengi vedu zvigadzirwa zvepamusoro uye zvemhando yepamusoro zvekugamuchira vaeni kuburikidza nekubatanidzwa kweR & D, kugadzira uye kutengesa.
AOLGA inotarisana nemidziyo yehotera uye inopa zvakachengeteka, zvakavimbika uye zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvemahotera kutenderera pasirese zvinoenderana nezvinodiwa uye hunhu, ine chigadzirwa chigadzirwa kuve bvudzi rinoomesa, ketera yemagetsi, muchina wekofi, simbi, chikero chemagetsi uye zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi uye kamuri. zvigadzirwa.
Kupa rutsigiro rukurusa uye yakatsaurirwa mushure-yekutengesa sevhisi, Aolga inopa mhinduro pazvinhu zvemukati nemasevhisi akakosha kune vatengi zvinoenderana nezvavanoda chaizvo.
Tiine CRM neE ERP masisitimu akashongedzerwa, tinogona kushandisa nyore nyore ruzivo rwese rwakakosha uye zviwanikwa kugadzirisa zvigadzirwa mune zvese maitiro uye nekupa zvakanakisa uye zvakazara zvakakwana pre-sale uye mushure-kutengesa masevhisi kune vedu vatengi, kuve nechokwadi chekuti yega yega zvigadzirwa zvinogona kurondwa kumashure mukusarudzwa kwezvinhu zvakasvibirira, kugadzira, kutakura uye mamwe marekodhi zviri nyore, izvo zvinotiunzira kugona kwakanyanya uye kugutsikana kwevatengi.